36 Maalmaha Nooca: Isu Soo Wada Duub Dhamaan Nakhshadeeyayaasha | Abuurista khadka tooska ah
Dhacdadan cajiibka ahi waxay dhalatay qiyaastii 3 sano ka hor markay ahayd Nina Sans iyo Rafa Goicoechea Iyaga ayaa ku dhacay iyaga inay daabacaan shaqooyinka shaqsiyadeed ee naqshadeeyayaasha garaafyada shabakadaha bulshada. Ujeeddadiisu waxay ahayd inuu sameeyo wax yarñin la shaaciyo shaqadii ay qabanayeen tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah, laakiin tirada dadka raacsan, kuwa jecel iyo faalooyinka kale ee bilaabay inay kasbadaan, waxay isaga kaxeeyeen waddo caan ah.
Taariikhda abaabulka ee dhacdadan ayaa dhacday laga bilaabo Febraayo 21 illaa 28 Maarso, 2017 iyo 36dii maalmood ee la soo bandhigayay, qof kasta oo ka qaybqaatay wicitaankan adoo adeegsanaya farshaxankiisa, wuxuu ku leeyahay boos yar aqoonsi caalami ah. Macno malahan sida aad hibada u leedahay ama hadii aad hada uun ka biloowdo joornaaliiste, waxa xiisaha leh waa hal shay, hada naftaada ayaa lagu ogaanayaa.
1 Naqshadeynta, Shaqooyinka iyo Farshaxanka Farshaxanka: Wax Walboo Yar Ayaa Jira
2 Magacaabistani waa mid rasmi ah waana isbeddel saafi ah
3 Daabacaadda xigta: 2018 ayaa soo socota
4 Habka ugu fudud ee aad naftaada u kobcin karto oo aad u raadiso shaqo bilaash ah: 36 Maalmood oo Nooca ah
Naqshadeynta, Shaqooyinka iyo Farshaxanka Farshaxanka: Wax Walboo Yar Ayaa Jira
Waa tartan aad u adag, waxay leeyihiin naqshadeeyayaasha qaabdhismeedka khibradda leh oo aan doonayn oo keliya inay naftooda is muujiyaan, laakiin halkii raadso in ay kireystaan ​​shirkado waaweynmidkoodnaas ee naqshadeynta. Caqabadaha waxaa matalaya tirada shaqooyinka lagu soo dhejiyay Instagram iyo tayada farshaxanka ee ay u soo bandhigaan dhagaystayaashooda.
Ballanta carwadda qalabka ayaa ah waxa ugu dhow ee lagu ururin karo 100 farshaxanno farshaxanno ah oo ku yaal baarkinka iyo derbiyo badan oo madhan oo diyaar u ah rinjiyeynta. Saacadaha maalintii oo dhan, waad ku farxi doontaa shaqooyinka kala duwan ee farshaxanka taas oo si tartiib tartiib ah kor ugu kacaysa waxayna u muuqataa inay ka fiican yihiin tii hore.
Tani waa mashruuc ujeedadiisu tahay inuu noqdo meel ay hal-abuur iyo farshaxan maskaxeedíguri guri waxaa lagu dhiirigelin karaa waqti aad u dheer. Waa muhiim in la ogaado in ka qaybqaadashadu aysan qasab ahayn inay socoto 36 maalmood in kastoo ay aad u dhib badan tahay, keliya tiro aad u yar ayaa ku guuleysatay inay soo bandhigaan farshaxanka 36 días, sameynta inta udhaxeysa 2 iyo 3 bandhig maalinti ah qalabkaaga
Magacaabistani waa mid rasmi ah waana isbeddel saafi ah
Ballankan ayaa ah mid ay sugayaan naqshadeeyayaasha iyo adduunyada farshaxanka garaafku, sidaa darteedna ay u arkaan naqshadeeyayaasha laftooda iyo ciyaaraha olíastaamaha farshaxanka. Haddii aad sifiican u garaneyso dunida farshaxanka, waxaad ogaan doontaa inay jiraan durba astaamo sudhan shabakadaha bulshada si ay u sameeyaan olole dhiirrigelin ah oo ay u yeeshaan xayeysiin.
Waxyaabaha aad ka heli karto waxaa ku jira sawir gacmeedyo yar yar oo ka mid ah naqshadaha farshaxan yahannadan waaweyn ama sidoo kale, fikradaha hordhaca u ah shaqadaada mustaqbalka. Iyada oo ku xidhan dhadhankaaga, ha ka shakin inaad ka heli doonto qaybaha aad ugu jeceshahay.
Daabacadaha ayaa leh dhammaan noocyada púdadweynaha, farriimaha iyo dhagaystayaasha, Marka ha quusan hadaanay soo galin waxyaabaha aad wali jeceshahay!
Daabacaadda xigta: 2018 ayaa soo socota
Haddii aad tahay farshaxan farshaxan leh oo aad rabto in dadku kuu aqoonsadaan inaad tahay xirfad-yaqaane, ¡¡¡ku bilow sameynta nashqadahañhal abuur iyo hal abuur leh! Ujeedada ogeysiiska hore waa inaad in badan ka sii cimri dheeraan karto waqtigii hore ee tartanka, maadaama, taasi ay tahay fikradda!
Waqtiga aad sii dheeraato, wax badan ayaad awoodi doontaa inaad aragto oo kaliya ma arki doonaan saaxiibbadaada ama dadka adiga ku yaqaan, laakiin sidoo kale wakiillada shirkadaha u heellan kuwaan kale. Isku day dadaal badan bambo galleyíah laga bilaabo Instagram si ugu yaraan hal qof u ogaado waxa aad sameyneyso.
Habka ugu fudud ee aad naftaada u kobcin karto oo aad u raadiso shaqo bilaash ah: 36 Maalmood oo Nooca ah
Haddii ay dhacdo inaadan horay u aqoon, joogitaanka 36-maalmood ee kor u qaadista farshaxankaaga waa bilaash.
Laakiin waxaa jira wax muhiim ah oo ah, waqtiga diiwaangelinta waa inaad bixisaa lacag aad u badan. Tan waxaa loo qaadan karaa “ugu deeqayón”Iyo sidii oo aysan taasi ku filnayn, caqliga ka dambeeya hawshan oo dhan ayaa ah kuwa sida ugu badan uga faa’iideysta ballantaan xagga xayeysiinta iyo dakhliga saafiga ah ee adeegsadayaasha tixraacaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » 36 Maalmaha Nooca: Isu Soo Wada Duub Dhamaan Naqshadayaasha